Bisha kibirka naxdinta leh: 'Dracula' & Queerness-ka aan la dafiri karin ee Bram Stoker
Bogga ugu weyn Buugaag naxdin lehFiction Bisha kibirka naxdinta leh: 'Dracula' & Queerness-ka aan la dafiri karin ee Bram Stoker
FictionBuugaag naxdin lehWarar Naxdin LehLGBTQ Naxdin
Waxaa jira waqtiyo inta lagu jiro Bisha Kibirka ee iHorror aan ogahay inay dadku si buuxda iiga indha tirayaan. Markaa waxaa jira waqtiyo aan q budhisto dillaacyada oo aan u diyaar garoobo qoraalka dambe. Marka aan ku qoro cinwaanka maqaalkan oo ku saabsan Dracula- mid ka mid ah sheekooyinka aan ugu jeclahay waqtiga oo dhan – si fiican, aan dhahno aragtiyada Kurt Russell iyo Billy Baldwin ayaa madaxayga ku dheeshay.
Marka, halkan ayaa socota…
In ku dhow 125 sano tan iyo Dracula Markii ugu horaysay ayaa la daabacay, waxbadan ayaan ka baranay nafteena iyo ninka qoray malaha buugga caanka ah ee ugu da'da yar ee taariikhda vampire, runtiina waxaa weeye, Bram Stoker wuxuu ahaa nin in badan ku qaatay noloshiisa qaangaarnimada ee u nugul ragga kale. .
Bandhigga A: Walt Whitman
Markii uu wada jiray afar iyo labaatan jirka, da 'yarta Stoker wuxuu curiyey waxa suurto gal ah mid ka mid ah waraaqaha ugu xiisaha badan ee aan shakhsiyan weligay u akhriyey abwaan Mareykan ah Walt Whitman. Waxay ku bilaabatay sidan:
Hadaad tahay ninka aan kuuqaatay inaad noqonaysid waxaad jeceshahay inaad hesho warqaddan. Haddii aadan ahayn waxba igama gelin inaad jeceshahay iyo in kale oo waxaan kaa codsanayaa oo keliya inaad dabka geliso adigoon akhrin wax ka fog. Laakiin waxaan aaminsanahay inaad ka helayso Uma maleynayo inuu jiro nin nool, xitaa adigu waxaad ka sarreysaa nacaybka fasalka ragga maskaxda yar, oo aan jeclaan lahayn inuu warqad ka helo nin da 'yar, shisheeye ah, adduunka oo dhan - nin ku noolaanshaha jawi naceyb ku ah runta aad heesaysid iyo qaabka aad ugu heesaysid.
Stoker wuxuu sii wadi lahaa inuu ka hadlo rabitaankiisa inuu ula hadlo Whitman sida gabayayaashu u yeeraan, isaga oo ugu yeeray "sayid", wuxuuna sheegay inuu ka maseyray oo aad moodo inuu ka baqayo xorriyadda uu qoraha weyn ku qaatay noloshiisa Ugu dambeyntiina wuxuu ku dhammeeyaa sidan:
Sidee wax u macaan tahay nin xoog leh oo caafimaad qaba oo leh indho naag iyo rabitaan ilmo inuu dareemo inuu la hadli karo nin noqon kara haddii uu doonayo aabbe, iyo walaalkiis iyo naagtiisuba. Uma maleynayo inaad qosli doontid, Walt Whitman, ama aadan i quudhsan doonin, laakiin dhacdooyinka oo dhan waxaan kuugu mahadnaqayaa jacaylka iyo naxariista aad i siisay ee noocayga oo dhan ah.
Ma ahan boodbood maskaxeed in la tixgeliyo waxa uu Stoker ula jeeday "noocayga." Xitaa markaa, si kastaba ha noqotee, wuu is keeni kari waayey inuu si toos ah u dhaho ereyada, halkii uu ka dheeli lahaa hareeraha.
Waxaad ka akhrisan kartaa waraaqaha oo buuxa iyo dood dheeri ah adoo HALKAN HALKAN. Whitman runti wuu ujawaabay ninkii yaraa, wuxuuna bilaabay waraaqo socon doona mudo tobanaan sano ah qaab ama qaab kale. Dhanka Stoker, wuxuu u sheegay saaxiibkiis Horace Traubel:
Wuxuu ahaa da 'yar jilicsan. [A] s si aan u gubo warqadda ama maahan - weligay iguma soo dhicin in aan wax sameeyo haba yaraatee: maxay tahay jahannamada aan u danaynayay haddii uu yahay mid ku habboon ama aan ku habboonayn? wuxuu ahaa mid cusub, cufan, Irish: taasi waxay ahayd qiimaha lagu bixiyo gelitaanka-waana ku filan: waa la soo dhoweeyay!
Sanado ka dib, Stoker wuxuu fursad u heli lahaa inuu sanamkiisa la kulmo marar badan. Whitman, wuxuu ka qoray:
Waxaan ka helay dhammaan wixii aan waligay ku riyoon jiray, ama aan ku jeclaan jiray: maskax weyn, aragti ballaadhan, dulqaad leh illaa heerkii ugu dambeeyay; naxariis jidh ahaaneed; fahamka garashada oo umuuqatay mid ka badan aadanaha.
Bandhigga B: Sir Henry Irving
Gali saamaynta labaad ee ugu weyn nolosha Stoker.
Sanadkii 1878, Stoker waxaa loo kireystay inuu noqdo shirkad iyo maamule ganacsi tiyaatarka Lyceum oo ay laheyd isla markaana ay maamusho Ireland - qaarna waxay dhahaan jilaaga ugu caansan adduunka, Sir Henry Irving. Geesinimo, kana weyn nin nololeed oo dalbaday dareenka kuwa hareerahooda ah, ma ahayn waqti at dhan isaga ka hor, sidoo kale, wuxuu qabtay meel sare ee nolosha Stoker. Wuxuu u soo bandhigay Stoker bulshada London, wuxuuna u dhigay boos inuu kula kulmo qorayaasha kale sida Sir Arthur Conan Doyle.
In kasta oo ay jiraan waxoogaa hubanti la'aan ah oo ah halka uu qoraagu ugu dambayntii u qaatay dhiirrigelinta taariikhda Dracula – Vlad Tepes ama halyeeygii reer vampire ee reer Abhartach – haddana waxa adduunka oo dhan la isku raacsan yahay in qoraagu ku saleeyay tilmaanta jireed ee Irving iyo sidoo kale qaar ka mid ah ninka. inbadan… karti… shaqsiyadeed tics.
Warqad 2002 ah oo loogu talagalay Dib-u-eegista Taariikhda Mareykanka ee cinwaankeedu yahay "" Buffalo Bill wuxuu la kulmay Dracula: William F. Cody, Bram Stoker, iyo Xuduudihii Burburka Jinsiyadda, " taariikhyahan Louis Warren ayaa qoray:
Sharaxaada badan ee Stoker ee Irving waxay aad ugu dhowdahay qeexitaankiisa tirinta mala awaalka ah ee dadka lafa-gura ay faallo ka bixiyeen isu ekaanta. … Laakiin Bram Stoker sidoo kale wuxuu gudaha ka galiyay cabsi iyo cadaawad uu shaqaalihiisu u muujiyey isaga, taasoo ka dhigeysa aasaaska sheekadiisa khayaaliga ah.
Sannadkii 1906, sanad kadib dhimashadii Irving, Stoker wuxuu daabacay taariikh nololeed laba mug leh oo ninka cinwaankiisu yahay Xusuusinta Shakhsiyeed ee Henry Irving.
Waxaa muhiim ah in la ogaado, in kasta oo uu ka shaqeynayay tiyaatarka illaa 27 sano, wuxuu bilaabay kaliya inuu qoro qoraal si uu u bilaabo Dracula qiyaastii 1890 ama sidaas. Waxay noqon doontaa nin saddexaad, oo ugu dambeyntii u muuqda inuu ku dhiirrigeliyey qoraaga inuu qalinka u dhigo warqad si uu u bilaabo sheekada sheekada.
Bandhig C: Oscar Wilde
Si xiiso leh ayaa ku filan, isla sanadkaas uu Stoker bilaabay inuu ka shaqeeyo Irving ee Tiyaatarka Lyceum, wuxuu sidoo kale guursaday Florence Balcombe, qurux caan ah iyo haweeney horay loola xiriiriyay. Oscar Wilde.
Stoker wuxuu garanayay Wilde sannadihii ay jaamacadda dhiganayeen, wuxuuna xitaa kula taliyay saaxiibkiis Irishka inuu xubin ka noqdo hay'adda Philosophical Society. Run ahaantii, labada nin waxay lahaayeen saaxiibtinimo sii socota, oo laga yaabo inay ka sii badan tahay, laga yaabee labaatan sano, oo booska u dhexeeya wuxuu bilaabay inuu koro ka dib Wilde waxaa lagu xiray Shuruucda Sodomy ee maalintaas.
Maqaalkeeda "'Wilde Rabitaan Ayaa I Qaaday': Taariikhda Homoerotic ee Dracula," Talia Schaffer ayaa tan ku tiri:
Stoker taxaddartii magaca Wilde ee dhammaan qoraalladiisii ​​la daabacay (iyo kuwa aan la daabicin) ayaa akhristaha siinaysa aragti ah in Stoker uu si hawo la’aan ah uga warwareegay jiritaanka Wilde. Ma jiraan wax intaas ka fog oo runta ah era Stoker tirtiritaankiisii ​​waa la akhrin karaa dhib la'aan badan; waxay adeegsadaan summad la aqoonsan karo oo ahayd, laga yaabee, in loogu talagalay in lagu jebiyo. Qoraallada si taxaddar leh uga hadlaya Wilde, Stoker wuxuu ku xardhay dulduleelada halka magaca Wilde uu ka muuqanayo iyadoo la adeegsanayo ereyo ay ka mid yihiin "degeneracy," "reticence," "digtooni," iyo tixraacyada xarigga booliiska ee qorayaasha. Dracula wuxuu baadhayaa baqdinta iyo walwalka Stoker isagoo ah nin khaniis isku dhow inta lagu gudajiro dacwada Oscar Wilde. – Schaffer, Talia. "" Rabitaan Wilde Ayaa I Qaaday ": Taariikhda Homoerotic ee Dracula." ELH 61, maya. 2 (1994): 381-425. La helay Juun 9, 2021.
Xaqiiqdii, waxay ahayd bil gudaheed markii laxiray Wilde in Stoker uu bilaabay qorista Dracula. Xidhiidhkani waa mid soo jiitay aqoonyahano badan oo qoday taariikhda labada qoraa iyo qoraaladoodii la daabacay.
Dhinaca kale, waxaad haysataa Wilde, oo qoray sheeko ku saabsan qof aan dhimaneyn oo noloshiisa ku noolaa meel bannaan, cawaaqib xumada ayaa la xukumi karaa, wuxuuna ka qayb qaatay himilooyin kasta oo qallafsan oo uu kari karo. Waxa uu ahaa ciyey-socod-socodkii aadka u quruxda badnaa ee isha oo dhan u soo jiiday oo isku duubay.
Dhinaca kale, waxaad haysataa Stoker, oo isna qoray sheeko ku saabsan geeri ma-taal ah. Si kastaba ha noqotee, dhimashadii Stoker waxaa lagu qasbay jiritaanka habeennimo, oo lagu qariyay hooska, dulin ku quudiya dadka kale ugu dambayntiina "si sax ah" ayaa loo dilay taas darteed.
Uma baahna boodbooyin dhab ah oo male ah gabi ahaanba in loo arko labadan noole inay yihiin matalaad ujeedo qoraayaashooda. Wilde waa la xiray, waa la xiray, aakhirkiina waa la masaafuriyay sababo la xiriira galmo ahaan. Stoker wuxuu ahaa mid adag – haddi u badanaaba daahir – guur yaa kusii doodi lahaa “sodomites” waa in laga kaxeeyaa xeebaha Great Britain sida kuwa badan ee siyaasiyiinta dhow dhow ee maanta la dagaallama bulshada LBGTQ +, oo kaliya in lala qabto iyaga Hoos u dhig surwaal markay u maleeyaan in qofna uusan raadineynin.
Sidoo kale waa iftiiminta in la ogaado in Wilde iyo Stoker labaduba ay u dhinteen dhibaatooyin ka yimid waraabowga, oo ah STD ku filan oo ku baahsan Fiktooriya London oo si uun u dareemeysa inay aad u badan tahay marka la fiiriyo xiriirkooda midba midka kale, laakiin taasi ma ahan halkan ama halkaas.
Buugiisa, Wax Dhiiga ku jira: Sheekada Aan Laheyn ee Bram Stoker, Ninkii qoray Dracula, David J. Skal wuxuu ku doodayaa in muuqaalka Wilde laga heli karo dhammaan bogagga Dracula, wax badan oo la mid ah muuqaalka muuqaalka ee Wilde ee ku xirnaa nolosha Stoker. Wilde wuxuu ahaa iskii hooska Stoker. Wuxuu ahaa doppelganger-kiisa oo ku dhiirraday inuu sameeyo wixii ninka laftiisu uusan awoodin ama uusan sameyn karin.
Halganka gudaha ee Stoker wuxuu ku yaal bog kasta oo ka mid ah Dracula. Iskudaygiisa isku waafajinta rabitaanka iyo aqoonsiga iyo dareenka hubin la'aanta iyo haa, mararka qaarkood is nacaybka isaga la saaray oo ay barteen bulsho ka dhigtay sharci darrada sharci darrada ayaa lagu xardhay sadar kasta.
Midkoodna maahan inuu buugga siiyo akhrin akhris si uu u helo. Waxaa jira daqiiqado badan sheekada oo dhan halkaasoo queerness, otherness, iyo maldahan ay ka boodayaan bogga.
Tixgeli xuddunta vampire ee Harker markii caruusadaha ay u soo dhowaadaan. Wuxuu ku daboolaa aadanaha jidhkiisa, isaga oo sheeganaya isaga. Ama waxaa laga yaabaa inuu yahay xiriirka iyo is-hoos-tagga u dhexeeya Dracula iyo Renfield oo u arka kan dambe inuu waalan yahay rabitaankiisa ah inuu u adeego?
Ficil ahaanta quudinta vampiric, oo dhiigga nolosha lagu soo saaro qaniinyo waxay qaadataa booska galitaanka galmada si aad u badan in xitaa markii ugu horreysay laqabsashada filimka ee sheekada, agaasimayaasha iyo qorayaasha la faray in Tirinta ay qaniin karto haweenka inay ka saaraan wixii soo jeedinta khaniisnimada ama labada jinsi
Xaqiiqdii, intii lagu jiray xilligii Hays Code, sida kaliya ee ay uga baxsan karaan oo ay ku jiraan wax kasta oo noocaas ah waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in Dracula uu ahaa sharlaawe oo loo qoondeeyay inuu dhinto. Xitaa markaa si dhib yar ayaa loo codeyn karaa oo loo soo jeedin karaa, laakiin marnaba lama muujin.
Tani, dabcan, waxay u horseedday jiilal dhan oo filim qaadayaal ah oo aan waligood akhriyin asalka asalka ah waxaana laga yaabaa inaysan waligood arkin dabeecadda dabiiciga ah Dracula. Iyagu waa dadka ku soo baxa qaybaha faallooyinka marka maqaallada sidan oo kale ah la daabaco oo ay qoraan qorayaasha, iyaga oo leh waxaan ka dhignay waxyaabahaan, waxaana kaliya isku dayaynaa inaan ku qasabno LGBTQ + mawduucyada aysan ka jirin.
Xaqiiqda, taasi waa sababta aanan u xusin filimada illaa iyo hadda. Dooddani waxay ku qotontaa buugga asalka ah iyo ninkii hindisay: nin runtii hubaal ahaa inuu yahay laba jinsi iyo suurta gal inuu yahay khaniis, qoraa la halgamay aqoonsiga iyo rabitaanka abuuray sheeko aan weligeed dhimanayn sida mawduucdeeda, iyo a waa nin noloshiisa oo dhan u huray ragga kale ee noloshiisa la soo saaray kaliya soddonkii sano ee la soo dhaafay ama wax la mid ah.
Soo Koobid Kama Danbaysta ah
Waxaa jira shaki la'aan dad joojiyay aqrinta qodobkaan sadarka hore ama labo kadib-qaarna xitaa kama aysan dhigin cinwaanka. Kuwa adkaystay, waxaan marka hore leeyahay mahadsanid. Marka labaad waxaan kaa codsanayaa inaad tixgeliso falcelintaada ku aaddan macluumaadkan ka hor intaadan ka jawaabin.
Ka fikir intaadan qaylin ka hor, "Kumaa dan ka leh?" Dabcan, waxaa laga yaabaa inaadan dan ka lahayn. Dabcan, macluumaadkaan macno malahan wax micno ah haba yaraatee. Sidee ugu dhiirran tahay inaad ka fikirto taas macnaheedu waa in macluumaadka uusan waxtar u lahayn qof kasta oo kale oo adduunka jooga, sidoo kale.
Ka mid ahaanshaha bulshada la hayb-sooco badanaa waxay ka dhigan tahay in taariikhdeenna ama la burburiyo ama la inkiro. Dad aan taariikh lahayn ayaa umuuqda inay yihiin dad gebi ahaanba. Waxaa na xakameynaya macluumaad la'aanta nafsadeena ah, kuwa aan ka tirsaneyn bulshada dhexdeeda waxay si fudud uga dhigi karaan inaan nahay qawaaniin cusub oo dabiici ah oo la duubay 1970s.
Markaa, wax macno ah kuma lahan adiga, laakiin waxay xaqiiqdii macnaheedu tahay wax xubnaha LGBTQ + ee waliba taageerayaasha naxdinta leh inay ogaadaan in mid ka mid ah buugaagti ugu naxdinta badneyd ee abid soo mar uu qoray nin nala wadaagay halgankeenna iyo halgankeenna. leh aqoonsigiisa sida inbadan oo inaga mid ah ay leeyihiin.
Taasi waxay mudantahay sanadka 2021, taasina waa wada hadalka Bisha Kibirsan ee Naxdinta leh ayaa sii wadi doonta kobcinta.
Bram StokerDraculaHenry IrvingBisha kibir naxdin lehLGBTQ NaxdinOscar WildePrideWalt Whitman
DAAWO: Filimka '' Street Street Trilogy '' ee 'Trailer Street Trilogy' wuxuu dhigayaa Argagixiso hore iyo Xarun